Looks Nepal घर घरमा गएर कोरोना बारे सचेतना जगाउंंदै छौं : वडा अध्यक्ष पराजुलि मण्डनदेउपुर नगरपालिका – Looks Nepal
(विश्व काेराेना भाईरस (काेभिड-१९) बाट त्रसित भैरहेकाे अवस्थामा स्थानिय निकाय पनि यश बाट जनतालाई सुरक्षीत राख्न लागि परेकाछन् । यहि सेराेफेराेमा मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं १२ ज्याम्दी का वडा अध्यक्ष गाेविन्द पराजुलि संग गरिएकाे कुराकानि )
देशभर कोरोना भाईरस कोभिड–१९ को महामारी छ । यो बेलामा जनप्रतिनिधिहरु कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
जनप्रतिनिधिहरु एकदम नै व्यस्त हुनुहुन्छ । सबैजना कोरोनाको त्रासमा हुनुहुन्छ तर हामी हिडिरहेका छौं । कहिले नगरपालिका, कहिले कार्यपालिका बैठक, कहिले विपदको बैठक, कहिले राहतको बैठक, कहिले स्वास्थ्यको बैठकमा पुगिरहेका छौ । त्रसित हुनुभएका जनताहरुलाई सचेतना पनि दिईरहेका छौं । जनताले छानेर नै यो अवस्थामा छौं । जनताको गुनासो सुन्ने र समाधन गर्ने कुरामा सदैब लाग्ने छौ लागिरहेका छौं ।
यो समयमा तपाईको वडाले के कस्ता कार्यहरु गर्यो ?
विश्व सँगै नेपाल कोरोना भाईरसको त्रासमा छ । यो वेलामा हाम्रो वडा पनि कोरानाको त्रास बाट अछुतो छैन । यो विचमा हामीले समग्रमा वडामा कोरेना बारे सचेतना फैलाउने, हात धुने बानी बसाल्ने, दुरी कायम गर्ने काम सिकायौं । कोरोना सचेतना बारे माईकिङ गरेका छौं । यस बडामा प्रबेश हुने दुई ठाउँमा हेल्प डेस्कको स्थापना गर्यौ ता की बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुलाई सचेतना सहित गाउँ प्रवेशमा सहयोग पुगोस भनेर । स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई हाईअलर्टमा राखेका छौं । यस वडामा रहेका सबै घरधुरीमा मास्क वितरण गर्यौ । वडाका घर घरमा गएर कोरोना बारे सचेतना जगाउने काम पनि गरिरहेका छौं ।
तपाईका वडामा राहतका काम के भईरहेको छ ?
भुकम्पमा भएजस्तो राहत त हामीले बाँडेका छैनौं । हाम्रो वडामा लकडाउनको कारण खान नै नपाएका केहि व्यक्तिहरुलाई राहत उपलब्ध गराएका छौं । जनतालाई दुःख छ तर पनि खान नै नपाएकाहरुको पहिचान गरेर मात्र राहत बाँडेका छौं । अहिले नगरले पनि राहत सामाग्री खरिद गर्ने र अति बिपन्न परिवार छनौट गरेर मात्र राहत उपलब्ध गराउने कुरा भएको छ । सरकारले एक द्धार प्रणलीबाट राहत बाँड्न भनेको छ । बडागत हिसावमा जस्को हात जोर्न समस्या भएको छ, जो विपन्न छ उहाँहरुले वडामा भन्नुहोला हामी राहत उपलब्ध गराउँछौं । तर जो सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरुले बुझिदिनुहुन पनि म अनुरोध गर्दछु । वडामा विपद् व्यवस्थापन समिति छ । त्यस समिति मार्फत केहि कोष खडा गरेका छौं । वडाभित्रका सक्ने तथा खुशी साथ सहयोग गर्नेहरुले गर्नुभएको सहयोग विपन्नहरुमा पु¥याएका छौं । वडाबासीहरुमा अनुरोध गर्न चाहान्छु तपाईहरु केहि सहयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने नगरपालिकामार्फत राहत उपलब्ध गराई एक द्धार प्रणलीलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गर्दछु ।
वडागत हिसावमा रहेका योजनाहरुको काम के भईरहेको छ ?
वडागत हिसावमा छुट्टिएका केहि योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । केहि योजनाहरु आधा सकिएका छन् भने १२÷१५ योजना सम्झौता भएर काम अगाडी बढेका छन् । यहि विचमा कोरोनाको कहरले समस्या बनायो । केहि काम रड र सिमेन्ट नभएको कारण रोकीएका छन् । कोरोनाको कहर हटेर राम्रो अवस्था आयो भने एक डेढ महिनामा योजनाहरु सक्छौं । नसकिएका योजनाहरुलाई नगरबाट पनि नगर्ने तथा अर्को बर्षमा बजेट विनियोजन गरेर कार्य सम्पन्न गर्ने कुरा भएको छ ।
तपाईलाई मकै बढि मुल्यमा बेच्यो भन्ने आरोप लागेको छ नी के भन्नुहुन्छ ?
म २०४९ भन्दा अगाडी शिक्षक थिए । २०४९ मा साविक ज्याम्दी गाविसमा अध्यक्ष उठे । राजनितिक रुपमा अगाडी बढेपछि शिक्षण पेशालाई छोडिदिए । जागिर छोडेपछि आर्थिक रुपमा कमजोर भए । त्यसपछि मैले आर्थिक अवस्था सुधारको लागि किराना, भेटेरीनरी तथा विउ विजनको पसल राखे । राजनिति र पसललाई सँग सँगै लगे । २०४९ देखि नै मैले पसल गरे । मैले यो बर्ष मात्र हैन हरेक बर्ष विउविजन बेच्दै आएको छु । यो बर्ष पनि मैले मकैको विउ किसानलाई उपलब्ध गराएकोे हुँ । लकडाउनको समयमा किसानलाई मकैको विउ लिन जान समस्या त छदै छ त्यसमा उहाँहरु लिन नै गए पनि बजारमा मकैको विउको अभाव थियो । यो क्षेत्रमा हुने सिपि ८०८ जातको मकैको विउ पाउन मुस्किल थियो । पुरानो विउविजन पसल भएकोले सम्बन्धको आधारमा मैलै यहाँका किसानहरुलाई सहयोग गर्नको लागि मकैको विउ लेराए । किसानहरुले रुचाएको विउ ल्याइसकेपछि सबै किसानको घर घरमा पुर्याउन सजिलो होस भनेर सहकारी मार्फत विउ विजन बाँडे । यो जातको मकै भनेजति पनि पाउन मुस्किल पर्छ । जनतालाई सहज होश भनेरनै मैले आफैले प्रयास गरेर मकैको विउ ल्याएको हो । सहकारी मार्फत २२ सय ५० को हिसावले मैले किसानलाई मकैको विउ उपलब्ध गराएको हुँ । अझ लकडाउनको बेला छ किसानहरुसँग पैसा नभए दुई÷तीन महिनामा रकम उपलब्ध गराउने गरी विउ उपलब्ध गराए । मैले धेरै बर्ष देखि गरेको पेशा हो । वडा भरका जनताहरुलाई विउ विजन उपलब्ध भएको छ । तर मेरो इमान र इज्जतबाट त्रसित भएर मलाई वायस गरेर र षडयन्त्र गरेर मेरो विषयमा गलत सूचना सम्प्रेषण भयो । यस प्रति दुःख व्यक्त गर्दछु । म एउटा जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई अप्ठेरो पर्ने काम कहिल्यै ग¥या पनि छैन गर्दा पनि गर्दिन । अझ सस्तो रुपमा मैले जनतालाई सहयोग गरे । यो जातको मकै यो भन्दा बढि मुल्यमा धेरै ठाउँमा विक्रि वितरण भएका छन् । जनताको अवस्था हेरेर नै कम मुल्यमा मकैको विउ उपलब्ध गराएँ । ब्मैले गल्ती गरे भने उजागर होस मेरो गुनासो रहन्न तर गर्दै नगरेको कुरामा सत्य तथ्य बुझेर मात्र सप्रेषण भयो भने मैले जस्तो अरुले दुःख सहनु पर्दैन थियो ।